Top 5 Wine Ọnọdụ Na Europe Na Esi E | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Wine Ọnọdụ Na Europe Na Esi E
Top 5 Wine Ọnọdụ Na Europe Na Esi E
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
Ezi wine n'anya maara na wine obodo na Europe na-enye oké ọnụ na-eju wine. site France ka Italy, na n'ihu, mba ndị a na-mata site na ọtụtụ ndị na-nwere ihe kasị mma mmanya na ụwa.
na akụkụ, nke a bụ n'ihi na ezigbo ihu igwe na-eto eto na ọnọdụ, ma ọ bụ ka ihe art. Ọ bụghị onye ọ bụla maara otú ime ka ọtụtụ na-atọ ụtọ mmanya.
Wine hụrụ mara na n'ebe ụfọdụ na-a bit ike iru ụgbọ okporo ígwè dị ka ha na-esite na obodo. ekele, Western Europe nwere ọtụtụ obodo na ka nwere ike na-enye gị ihe kasị mma mmanya na Europe. Plus, ị ga-enweghị ka onwe gị nsogbu na-achọta a ụzọ iji nweta ha, dị ka ndị a niile na- iji ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na gị amalite bụ ihe ọ bụla nke isi mba na Europe, ị ga mfe oge na-e.
Na ihe nile nke na n'uche, ka na-a lee anya na kacha ndepụta nke kacha mma wine obodo na Europe na otú ileta ha n'ụgbọ okporo ígwè.
Dị mwute ikwu na-amaghị onye ọ bụla, na Rhine River Valley na Germany jupụtara quality ubi vaịn. Ha na-emepụta ihe kacha mma mmanya na niile nke Germany, na ọtụtụ n'ime ha ruo Koblenz.
Nke a obere obodo dabeere na osimiri Rhine na awade ụfọdụ ndị kasị mma wine Ogwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na mpaghara. Ọ bụ karịsịa mara mma, na-amasị ụfọdụ ndị ọzọ ibu obodo na ebe.
Ubi vaịn na mpaghara na- ama n'ihi na ha na ụwa ji mma Riesling wine. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na ị chọrọ ileta sinik obodo nke Koblenz, ị ga-agbalị a iko ma ọ bụ abụọ nke oyi na-acha ọcha wine.
Na-na Koblenz bụ nnọọ mfe, dị ka o nwere otu nke kasị mma ebe nke niile Rhine Valley wine obodo. Ọ gara ọkara n'etiti abụọ isi German obodo - Cologne na Frankfurt, na ngwa ngwa ụgbọ oloko na-aga Koblenz si ma. Ihe bụ ihe ọzọ, obodo dabeere na agakarị Rhine Valley sinik ụgbọ okporo ígwè na-aga.
N'ikpeazụ, obodo dịtụ nso ala na Netherlands, Belgium, Luxembourg, na France. Na pụtara na ị ga-enweghị nsogbu na-achọta a ụgbọ okporo ígwè si ná mba ndị a dị ka nke ọma.
Berlin na Koblenz Ụgbọ oloko
Frankfurt na Koblenz Ụgbọ oloko
Luxembourg na Koblenz Ụgbọ oloko
Stuttgart na Koblenz Ụgbọ oloko
Vienna bụghị naanị n'etiti ndị kasị mma obodo ibi; ọ bụ nakwa n'etiti ndị kasị mma wine obodo na Europe. The obodo na-arụpụta a otutu wine ke ofụri ofụri, ọtụtụ nke si na ubi-vine-tinyere Danube ndagwurugwu. Vienna onwe ya bụ otu n'ime ole na ole ụwa n'isi obodo na-arụpụta wine n'ime obodo.
All nke na pụtara na ị ga-enwe ohere na-agbalị kasị mma mmanya na mba nwere na-enye, nri na Vienna. Ọzọkwa, unu mara na a kalama mmanya na-enwe bụ Weissburgunder.
Vienna bụ isi obodo nke Austria na otu n'ime isi obodo na Europe, pụtara na ị ga-ngwa ngwa na-e jiri ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụ Central okporo ígwè ehiwe nwere njikọ ọtụtụ mba ndị agbata obi.
Anyị doro anya ghota maka Top 5 wine obodo na Europe bụ Bordeaux, France
Ndị gị maara na mmanya, mara na Bordeaux na France bụ otu n'ime ihe ndị kasị mara wine n'isi obodo nke ụwa. Ọ bụ ya mere na ọ bụ na ndepụta nke ihe ndị kacha mma wine obodo na Europe. All mmanya mere na a ma ama na mba aga n'ime obodo na-enwe.
Bordeaux mmanya na-ama maka ha ịnweta na mkpụrụ ndetu, si tart nkpuru dịkwa ụtọ mfri eke mfri. Ndị a mmanya na-enwe ịtụnanya ike nká ọma. Na eso ụzọ mgbe ahapụ ha ka afọ ruo ọtụtụ iri afọ.
ndammana, ị na-adịghị na-agbalị ochie mmanya na-eri a uba na-enweta na mpaghara kacha mma mmanya. E nwere ọtụtụ ọnụ mmanya na ahụkebe price-uru ruru. The top wine mkpa ka ị na-agbalị ebe a bụ Red Bordeaux.
Na-eru obodo ahụ ga-agaghị abụ nsogbu, n'agbanyeghị ebe ị na-emi odude ke Western Europe. Ihe bụ ihe ọzọ, ọtụtụ ndị ụgbọ okporo ígwè e-aga na-Bordeaux enye elu-ọsọ ụgbọ oloko. Ị ga na mkpa a awa ole na ole ruo n'obodo si n'ebe ọ bụla France. The ụgbọ okporo ígwè si Paris esịmde Bordeaux na-erughị 3 awa!
Toulouse ka Bordeaux Ụgbọ oloko
Lyon ka Bordeaux Ụgbọ oloko
Florence, Italy bụ ikpeazụ anyị Wine Cities in Europe
The ọla nke Tuscany, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile nke Italy, Florence bụ zuru okè obodo na nke kacha mma mmanya na mba. E nwere ọtụtụ obodo niile ndị dị gburugburu obodo na-emepụta na ihe magburu onwe Sangiovese wine na ha niile kwesịrị na-na ndepụta wine obodo na Europe. Ndị a ọmarịcha obodo nta na pụtara Italian ime bụ ike iru, ma n'obodo Florence bụghị.
Ị nwere ike iru obodo ụgbọ okporo ígwè si n'ebe ọ bụla Italy, ma ọ bụ n'ihu, dị ka Switzerland na France. E nwere mgbe niile, elu-ọsọ ụgbọ oloko na-aga ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị site na Milan na Rome, kamakwa site Venice. Ndị a njem lee ihe na-erughị awa abụọ, ị na-enweta ohere ịhụ ugwu nta mara mma na ubi nke Italytali.
Ya mere ị dị njikere na-enwe wine obodo na Europe? SaveATrain.com ga-enyere gị ga-esi ọ bụla obodo Europe, ngwa ngwa, ọnụ ala, na na a ọnụ ọchị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#goodwine europeantravel europetravel Tranride ụgbọ oloko traintip Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly mmanya